IIFILIMU EZILI-15 EZIPHAMBILI ZASERUSSIA KWINETFLIX - IIMUVI
Iifilimu ezili-15 eziphambili zaseRussia kwiNetflix
Ukuba uyadikwa ziimovie eziqhelekileyo zaseMelika kwii-OTT, ukuphonononga iifilimu zangaphandle kunokuba yeyona nto ilungileyo
Ukuba uyadikwa ziimovie eziqhelekileyo zaseMelika kwii-OTT, ukuphonononga iifilimu zangaphandle kunokuba yeyona nto ilungileyo yokugcina ukonwatyiswa. INetflix ithenge iimuvi ezimbalwa ezintle ezenziwe eRussia ezibonisa ngokwenyani imbali yazo, ulwimi kunye nendlela abaphila ngayo. Ukuba sele ubonakalisiwe kwimiboniso bhanyabhanya yesiNgesi ebekwe kwezinye iindawo, inokuba sisiqalo esihle solunye uhlobo!
Apha ngezantsi kukho uluhlu lweefilimu eziphezulu ezili-15 zaseRussia ezisasaza kwiNetflix.
1. UHenry uHenry
I-cyborg esandula ukuvuswa, uHenry, kufuneka asindise umfazi wakhe, okwangumdali wakhe, ekubanjweni sisikhohlakali se-AKAN esinobuchwephesha bobuchwephesha. Ukulwa noHenry nguJimmy, ekuphela kwethemba lakhe lokusinda emini. Umboniso bhanyabhanya uqhubeka ngaphezulu kosuku olunye, eMoscow, eRashiya.
Umboniso bhanyabhanya ubeka ixesha leentsuku ezintandathu ebomini zombhali obhalayo ongaphaya kweembono ezimxinwa kunye nemida yeSoviet Russia kwii-1970s. USergei Dovlatov wazabalaza ukugcina kunye nokubonisa amandla akhe ecaleni kwembongi uJoseph Brodsky.
3. ULwandle oluMnyama
Umphathi wenqanawa enamava aphulukana nomsebenzi wakhe. Ugqiba kwelokuba ahlangane kunye nabasebenzi bezinto ezingalunganga ukuze afumane ubutyebi obutshonileyo obunamahemuhemu okuba alibaleke nzulu kuLwandle oluMnyama. Xa ukunyoluka kunye nefrenzy zithatha uhambo lwabo, i-mission iya emazantsi kwaye ijike ibe ngumlo wokusinda.
UVlad, umlindi oneminyaka engamashumi amane ubudala kwindawo yokukhosela endala eza kutshatyalaliswa kungekudala. Ngobunye ubusuku, isibini, uVera noStas, bafika kwisibhedlele. Ukuva ibali labo lokubaleka kubahlobo kunye nosapho, uVlad uyakhunjuzwa ngexesha lakhe elidlulileyo kunye nendlela abaleka ngayo. Uthatha isigqibo sokubanceda bahlale bekhuselekile kwaye, kwinkqubo, betyhila izinto ngaye nakwesi sibini.
5. Uzalelwe ukuba ukhululeke
liphuma nini ixesha elifileyo le-7 kwi-Netflix
Ukuphosa ukukhanya koxhatshazo lwezilwanyana ezanyisayo zaselwandle, olu xwebhu lushukumisayo lubonisa ubunzima beminenga eyi-18 yaseBeluga egcinwe ekuthinjweni iminyaka. Zonke ekuqaleni zazenzelwe i-aquariums zase-US kodwa zazingavunyelwanga ngenxa yomthetho omtsha. Oku kulishiyile iqela laseBelugas laya kuhlala kwiitanki ezincinci eRashiya, kwaye ekugqibeleni, emva kweminyaka emithandathu yokuthinjwa, umnenga omnye wasweleka ngelixa abanye begula kakhulu.
Cwangcisa ukukhanyisa inyani malunga nokusebenzisa iziyobisi kwezemidlalo, iinyani ezivezwe sisazinzulu saseRussia ziguqula le movie ibe yimfihlakalo yezopolitiko. Phakathi kokusweleka okungachazwanga kunye neembasa zegolide zeOlimpiki kulele ibali eliza kuveza elinye lamahlazo amakhulu embalini.
Isibini eRussia sihamba ngoqhawulo-mtshato olubi nolubi, luzele kukulwa, izityholo kunye nobushushu. Bobabini banamaqabane amatsha kwaye abanakulinda ukushiya omnye de unyana wabo oneminyaka eli-12 ubudala anyamalale emva kokuphulaphula enye yeempikiswano zabo.
8. Intsapho edumileyo
Intombazana encinci ineentloni ikhula inethemba lokuba inamandla amakhulu okwenza iminqweno izaliseke. Kodwa njengokuba esiba mdala, kufuneka ajongane nenyani xa esiya eMoscow kwaye ajongane nobunzima, iimvakalelo kunye nentloko yobomi kuqala.
liphuma nini ixesha lesibini leemagnolia ezimnandi
9. Iintsuku ezimbini
UPetr Drozdov, umphathi omkhulu waseRussia, eMoscow, wamkela isibheno serhuluneli sokudiliza imyuziyam yasemaphandleni yoncwadi lwaseRussia. UMasha ngumfundi oselula osebenza kwimyuziyam, kwaye uthatha isigqibo sokuyicenga le nto kwaye ufuna ukuba igcinwe ikhuselekile.
10. 8 Imihla yokuQala
Ibali elihlekisayo apho abalinganiswa abaphambili bevuka ebhedini enye rhoqo kusasa, nokuba balala phi. Ngokukhawuleza bayaqonda ukuba banamathele kwilokhwe ixesha kwaye ekugqibeleni bazana ngcono.
Ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde wenziwe nguMarc Chagall, le filimu isebenza njenge-ode emsebenzini wakhe. Yintoni eyenzeka kwiscreen ngumboniso owenziwe kakuhle wobuchule, iinyani kunye nokubaxwa okukhuthazwe ngamaphupha akhe kunye nengcinga yasendle.
12. Abasebenza ngenqwelomoya
Xa umnxeba wokufuna uncedo ufunyanwa kwisiqithi sentaba-mlilo, inqwelo-moya yenqwelo moya yaseRashiya yaqala uhambo lokuhlangula. Oku kubabeka engozini ngakumbi kunokuba babecinga ukuba bazokuhamba kwaye bajike babe ngumlo wobomi bamaxhoba kunye nobabo.
13. I-Arhente yokuLawula ubuGcisa eyimfihlo
Abalinganiswa abaphambili beentsomi ezithandwayo zabantwana, uHansel noGretel, baqeshwa njengabameli bemfihlo. Banyanzelwa ukuba basebenzise ubulumko babo, ukucinga ngokukhawuleza, ukusebenzisana kunye nomlingo ukufumana kunye nokuhlangula inkosi elahlekileyo kwimishini yabo yamva nje.
14. Iziganeko ezibulalayo
Ababhiyozeli abaziwayo, abazalwana baseRomanov, bafaka umboniso wabo wokugqibela ngaphambi kokuba baphelise ubuhlakani babo. Kodwa oku kulandelayo yintlekele njengoko omnye wabancedisi babo enyamalalayo kwitanki elizele ngamanzi. Kwii-headphone zabo zelizwi, ilizwi eliyimfihlakalo libanga ukuba unentombazana kwaye uyayibulala ukuba umboniso awuqhubeki, ngaphandle kokuphambana nezixhobo zabo.
bhanyabhanya njengenkosi yamakhonkco
Iqela labafana abathathu kunye namantombazana amabini aya eholideyini ukubhiyozela uNyaka oMtsha encotsheni yentaba. Kodwa oku ngokukhawuleza kujika kube liphupha elibi xa imoto yabo yekhebula imisa xa bewela enzonzobileni. Uloyiko kunye nokuphelelwa lithemba kuthatha indawo, kubangela ukuwa phakathi kweqela.
Olu luhlu lweemovie luxhomekeke kutshintsho kunye nezongezo kunye nokususwa kulawulo lwangoku lweNetflix kwaye kubandakanya ezinye zeemovie zabo eziphambili zaseRussia. Zonke ezi zikalwe kakhulu ngabagxeki kunye nabaphulaphuli kwaye kufanelekile ukubukela. Ke, qhubeka, ungene kwiakhawunti yakho yeNetflix kwaye uqalise imovie enomdla kuwe namhlanje!
Isikolo esiphakamileyo se-dxd umhla wokukhutshwa kwexesha elitsha
Uhlobo olungqindilili lwexesha 5 iziqephu
Umhla wokukhutshwa kweemagnolias ezimnandi
yexesha lobomi 1 lokugqibela
Ixesha elitsha lokuhamba uswelekile kwi-netflix
Iintsomi zamaGrike zemidlalo bhanyabhanya 2015
wena ityhubhu idrama yesitshayina